बैंक अफ काठमाण्डूसहित १२ कम्पनीको उच्च शेयर माग, कुनको कति ? - नेपालबहस
बैंक अफ काठमाण्डूसहित १२ कम्पनीको उच्च शेयर माग, कुनको कति ?
| १८:२९:३६ मा प्रकाशित
३ जेठ, काठमाडौं । सोमबार शेयरबजारमा तीन वाणिज्य बैंक सहित १२ कम्पनीको शेयर खरिद माग उच्च रहेको छ । यस दिन बैंक अफ काठमाण्डू, मेगा बैंक र नेपाल बंगलादेश बैंकसहित अन्य ९ कम्पनीको शेयर खरिद माग उच्च देखिएको हो ।
यस दिन नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक, अरुण भ्याली हाइड्रो, युनाइटेड मोदी हाइड्रो, समता घरेलु लघुवित्त, हाइड्रो इलेक्टोसीटी, राधी जलविद्युत, हिमाल दोलखा, अपि पावर र मुक्तिनाथ विकास बैंकको शेयरमा उच्च शेयर खरिद माग रहेको छ ।
अरुण भ्याली हाइड्रोको
यस दिन सबैभन्दा बढि अरुण भ्याली हाइड्रोको शेयरमा उच्च खरिद माग आएको छ । यस दिन कम्पनीको शेयरमा २० लाख ५७ हजार कित्ता शेयर खरिद माग रहेको छ ।
कम्पनीको शेयरमा २० लाख ५७ हजार कित्ता शेयर खरिद माग आउदा ५७ हजार कित्ता बिक्री आदेश रहेकोे छ । यस दिन कम्पनीको शेयर ५ प्रतिशतले वृद्धी भई प्रतिकित्ता शेयरमूल्य ३ सय २९ रुपैयाँ पुगेको छ । कम्पनीले हाल ैहकप्रद निष्कासन गरेको हो । जसले गर्दा यतिबेला कम्पनीको शेयरमा खरिदकर्ता धेरै छन् ।
राधी विद्युत कम्पनी
यस दिन लगानीकर्ता राधी विद्युत कम्पनीको शेयरमा झुम्मिएका छन् । कम्पनीको शेयरमा ११ लाख ७२ हजार कित्ता शेयर खरिद गर्न लगानीकर्ता झुम्मिएका हुन् । कम्पनीको शेयरमा ११ लाख ७२ हजार कित्ता शेयर माग आउँदा बिक्री आदेश शून्य रहेको छ ।
आज कम्पनीको शेयर ९.९४ प्रतिशतले बढेर प्रतिकित्ता शेयरमूल्य ७७४ रुपैयाँ पुगेको छ । आज कम्पनीले गत वर्षको मुनाफाबाट शेयरधनीलाई ३६.५० प्रतिशत लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले राम्रो लाभांश घोषणा गरेसंगै कम्पनीको शेयर खरिद गर्न लगानीकर्ताको भिड लागेको हो ।
मेगा बैंकको शेयरमा खरिद माग उच्च रहेको छ । बैंकको शेयरमा ८ लाख ७६ हजार कित्ता खरिद माग रहेको छ ।
हालै मेगा बैंकले तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको हो । उक्त विवरणका अनुसार बैंकले चालु आवको ९ महिनामा ३५.९५ प्रतिशतले मुनाफा बढाएको हो ।
गत आवको सोही अवधिमा १ अर्ब ४५ करोड १० लाख ९० हजार रुपैयाँ मुनाफा गरेकोमा बैंकले चालु आवको सोही अवधिमा मुनाफा बढाएर १ अर्ब ९७ करोड २७ लाख ५५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
नेपाल बंगलादेश बैंकको शेयरमा खरिद माग उच्च रहेको छ । बैंकको शेयरमा ८ लाख ५० हजार कित्ता खरिद माग रहेको छ ।
बैंकको शेयरमा १० लाख ४५ हजार कित्ता खरिद माग आउँदा १ लाख ३२ हजार कित्ता बिक्री आदेश रहेको छ । यस दिनसम्म बैंकको शेयरमूल्य ३८८ रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक
यस दिन बजार बन्द हुने समयमा सबैभन्दा बढि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको शेयरमा उच्च खरिद माग देखिएको हो । बैंकको शेयरमा ५ लाख ६३ हजार कित्ता खरिद माग रहेको छ ।
बैंकको शेयरमा ५ लाख ६३ हजार कित्ता खरिद माग आउँदा १ लाख २९ हजार कित्ता बिक्री आदेश रहेको छ । यस दिनसम्म बैंकको शेयरमूल्य ५५१ रुपैयाँ पुगेको छ ।
चार महिना अगाडि बैंकले अहिलेसम्मकै ठूलो संख्याको आईपीओ निष्कासन गरेको थियो । आईपीओ बिक्री पश्चात कम्पनीले संस्थापक र सर्वसाधारण तर्फको गरी कुल २० लाख कित्ता शेयर नेप्सेमा सूचीकृत गरेको हो ।
नेप्सेले कम्पनीको पहिलो कारोबारका लागि प्रतिकित्ता ११३ दशमलव ६२ देखि ३४० दशमलव ८६ सम्मको मूल्य रेञ्ज तोकेको थियो । सूरुवाती केही दिनहरुमा सर्किट लाग्दै सात बढि शेयरमूल्य पुगेको बैंकको शेयरमूल्य घटेर यतिबेला ५ सय ३७ रुपैयाँ रहेको छ ।
यस दिन हिमाल दोलखा हाइड्रोको शेयरमा ४ लाख १९ हजार कित्ता शेयर खरिद माग रहेको छ । त्यस्तै, युनाइटेड मोदी हाइड्रोको शेयरमा ६ लाख १७ हजार कित्ता,समता लघुवित्तको शेयरमाको शेयरमा ३ लाख ५० हजार, बैंक अफ काठमाण्डूको शेयरमा ३ लाख ४ हजार र अपी पावर कम्पनीको को शेयरमा ३ लाख १९ हजार कित्ता खरिद माग रहेको छ ।
कुन कम्पनीको शेयर कति माग
माई सेकेण्ड टिचर ‘मेरो डिजिटल नेपाल, मेरो परिकल्पना’ प्रतियोगिता शुरू, उत्कृष्ट ७ लाई २५ हजारदेखि १ लाखसम्मको पुरस्कार २ मिनेट पहिले
आँधीखोला तर्ने क्रममा डुबेर एकको मृत्यु २४ घण्टा पहिले
कालीगण्डकीमा वर्षायाममा पनि नदीजन्य वस्तु उत्खनन गर्ने निर्णय ७ घण्टा पहिले
अवैध दोहन हुने क्रम नरोकिएपछि ‘कालीगण्डकी सभ्यता बचाऔँ अभियान’मा युवा सक्रियता १० घण्टा पहिले
कोरोनाले पूर्व सञ्चार राज्यमन्त्री तप्तबहादुर बिष्टको मृत्यु ९ घण्टा पहिले
पुल नहुँदा खोलामा जोखिम मोलेर सवारी वारपार ७ घण्टा पहिले
विश्व हिन्दु परिषद नेपालद्धारा पर्साको मठमन्दिरमा राहत वितरण २३ घण्टा पहिले
महाकाली नदीको पारीगाउँ केन्द्रमा जलसतहले खतराको तह पार गर्याे ११ घण्टा पहिले
नेपालको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानकालागि विश्व बैंकद्वारा १७ अर्ब ५५ करोड ऋण सहायता स्वीकृत २ दिन पहिले
सेतीवेणीबासी अबिरल बर्षादले रातभर जाग्राम, बजारका ८ घरमा क्षती ! ४ दिन पहिले
हात्ती छेक्न लगाइएको करेन्ट लागेर महिलाको मृत्यु ५ दिन पहिले
बजेटमा खोपलाई पहिलो प्राथमिकता दिन आग्रह ७ दिन पहिले
महाकालीमा पानीको सतह बढेसँगै जोखिम उच्च २ दिन पहिले
देउवालाई प्रधामन्त्री बनाउनु पञ्चायती ब्यवस्था ब्युँताउनु हो: प्रधानमन्त्री ओली ३ दिन पहिले
बाघको आक्रमणबाट २ घाइते, प्रतिकारमा बाघको मृत्यु २ दिन पहिले
वाग्मतीले बजेटमा पत्रकारिता क्षेत्रको छुट कुरा सम्बोधन गर्ने ३ दिन पहिले
महोत्तरीमा गोली हानी लाखौँको डैकती ३ दिन पहिले
बालविवाह रोक्न चेपाङ समुदायमा अभियान २ हप्ता पहिले
नेपाल पक्षको स्थायी कमिटी बैठक जारी ३ दिन पहिले
सोमबार ११ कम्पनीको उच्च शेयर माग, कुनको कति ? २ हप्ता पहिले
राष्ट्रपतिलाई तिमी भनेको भन्दै ओलीले देउवामाथि आक्रोश पोखे ४ हप्ता पहिले
भारतमा केही दिनदेखि संक्रमण पुष्टि हुनेको सङ्ख्या घट्दै ४ हप्ता पहिले
साताको शेयर बजार : ८३ अर्बको कारोबार ! १ हप्ता पहिले
दियालो संस्थाको बार्षिक समिक्षा कार्यक्रम सकियो ७ महिना पहिले
सता समिकरणबारे जसपा छलफलमा २ महिना पहिले
जाजरकोट ६ वटा स्थानीय तहमा सञ्चार सेवा विच्छेद ४ महिना पहिले
पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि प्राविधिक टोली दैलेख आउँदै २ वर्ष पहिले